Alaivo Google ny tranokalanao vaovao
Vao tsy ela akory izay, nandefa tranokala vaovao be dia be aho. Rehefa nitombo ny AddressTwo ary nanafaka ny fotoako, namorona tafio-drivotra tonga lafatra amin'ny hevitra vaovao sy fotoana malalaka hanatanterahana izany, noho izany dia nividy domains am-polony maro aho ary nampihatra tranokala bitika havia sy havanana. Mazava ho azy, tsy manam-paharetana koa aho. Manana hevitra aho amin'ny alatsinainy, manangana azy amin'ny talata, ary mila fifamoivoizana amin'ny alarobia aho. Saingy mety maharitra andro na herinandro vao hiseho ny sehatra vaovao ataoko ao amin'ny karoka Google, na dia mitady ny anarako manokana aza aho.
Noho izany, nanomboka niady tamina formulazy iray aho mba hahatonga ny hala hala haingana kokoa. Raha alechemy ny SEO dia ity no labiera an-tranoko hanafainganana ny fotoana manomboka amin'ny fanombohana ka hatramin'ny index. Tsotra izy io, nefa voaporofo fa mahomby. Ny sasany tamin'ireo andrana nataoko farany dia nandady sy nipoitra tamin'ny valin'ny fikarohana tao anatin'ny 24 ora. Manaraka ireo dingana 8 tsotra fotsiny aho.
Amboary aloha ny SEO eo an-pejy, farafaharatsiny farafaharatsiny. Ekena fa tsy misy ifandraisany amin'ny hoe mandady ity fa raha tsy manao an'io aloha dia very maina ireo dingana 7 manaraka. Ataovy azo antoka fa hamboarina ny mari-pamantarana lohateny. Fa maninona no tena zava-dehibe izany? Satria, na dia afaka mahazo hala misy ny pejinao aza izahay, dia tsy midika izany fa hiverina haingana izy ireo. Noho izany, raha toa ka tsy dia misy lohateny an-tsoratra tsy dia voasoratra ny fandefasana anao voalohany, dia mety ho tafatoetra mandritra ny herinandro maromaro ianao miaraka amin'ny atiny cache tsy dia tsara loatra ao amin'ny index Google. Hamarino tsara fa izay maika anao ho hita dia mendrika ny ho hita mandritra ny herinandro vitsivitsy eo am-piandrasana ny mandady manaraka.
Mametraka Google Analytics. Ataovy izany alohan'ny sitemap noho ny antony tsotra iray: mamonjy fotoana izy io. Ny iray amin'ireo fomba hanamarinana ny tranokalanao vaovao amin'ny Google Webmaster dia amin'ny alàlan'ny Analytics soratra. Noho izany, mitahiry dingana iray ary ataovy ity aloha. Mba hanaovana izany dia tsidiho www.google.com/analytic.
Mandefasa sitemap XML amin'ny Google Webmaster Tools. Azonao atao ny mametraka plugins WordPress amina am-polony mba hamoronana ity sitemap ity ho azy, na hanao iray amin'ny tanana. Ilaina izany amin'ny fahazoana mandady mahitsy sy feno, na eo aza izany dia maro ireo webmaster novice no mino fa io no farany hamindra. Tsy. Raha mijanona amin'ity dingana ity ianao, toy ny 99% an'ny webmaster vaovao, dia hiandry herinandro na volana maromaro ianao alohan'ny handehanan'i Google mandady ny tranokalanao. Ny manaraka dia hanafaingana izany dingana izany. Raha hamita ity dingana ity dia tsidiho www.google.com/webmasters
Ampio ny URL ao amin'ny Profile LinkedIn. Rehefa manitsy ny mombamomba anao LinkedIn ianao dia manana fahaizana mampiditra hatramin'ny URL tranokala 3. Raha efa nampiasainao daholo ireo slot telo ireo dia tonga ny fotoana hanaovana sorona vonjimaika. Misafidiana iray amin'ireo URL esorina mandritra ny herinandro vitsivitsy ary soloina URL mankany amin'ny tranokalanao vao navoaka. Aza matahotra fa afaka manova an'io indray ianao any aoriana. Mametraha naoty ao amin'ny kalandrie ho anao TSY MISY ATY AMIN'NY 14 andro aorian'izay mba hiverenanao amin'ny piraofilina LinkedIn ary hamerenana amin'ny laoniny ny lisitry ny URL anao teo aloha. Nandritra izay 14 andro izay dia mety ho hitan'i Google ilay rohy vaovao ary arahana amin'ny tranokalanao.
Ampio ny URL amin'ny piraofilinao Google. Malalaka kokoa noho ny isan'ny rohy avelan'izy ireo ao amin'ny piraofilinao i Google. Rehefa tafiditra ao amin'ny Google ianao, avy amin'ny pejy Google (anisan'izany ny pejin-tranony) dia azonao atao ny manindry ny View Profile eo amin'ny zoro ambony ambony, avy eo kitiho ny Edit Profile. Eo ankavanana dia tokony hahita faritra antsoina hoe "Rohy" ianao. Any, azonao atao ny manampy rohy manokana. Eto ianao dia afaka mametraka ny vatofantsika amin'ny teny lakile tianao indrindra rehefa mampiditra ny URL-nao vaovao amin'ny mombamomba anao Google.
Cite ny tranokalanao amin'ny Wikipedia. Marina izany, spam amin'ny Wikipedia aho. Azonao atao ny mandefa ny mailanao fankahalana any amin'ny nick@i-dont-care.com. Ny tanjonao eto dia ny mitanisa loharano iray ao amin'ny tranonkalanao (lahatsoratra bilaogy na pejy fampahalalana hafa) ao amin'ny lahatsoratra iray mifandraika amin'ny Wikipedia. Misy zavakanto amin'izany. Ity ny tanjona: ny hahatafavoaka velona ny fitanisana anao farafahakeliny 72 ora alohan'ny hanafoanan'ny olona azy amin'ny Wikipedia. Mba hanatanterahana izany dia mitadiava lahatsoratra tsy dia malaza loatra. Raha mahazo fanovana marobe isan'andro ilay lahatsoratra, dia azo inoana fa hoesorina haingana ny fanampiana anao alohan'ny ahafahan'ny botan'i Google mahita azy. Saingy, raha mahita lahatsoratra mahazo fanovana ianao isam-bolana, dia izany ny tapakilanao volamena. Manampia fehezanteny vaovao manan-tsaina sy mifandraika (eny, na dia akademika sy tena izy aza) ary ampio a CITE_WEB andinin-tsoratra any amin'ny farany. Aza sahy loatra manisy fizarana na fehintsoratra vaovao tanteraka. Ny tanjonao dia ny ho hitan'ny bots, fa TSY ho hitan'ny olombelona.
Mamoaha lahatsoratra Google Knol. Vantany vao fantatr'i Google fa malaza be i Wikipedia, dia nanandrana nifaninana taminy izy ireo. Google Knol (www.google.com/knol) dia kely lavitra noho ny akademika ary tsy misy rafitra miambina hamafana ireo lahatsoratra mahaliana azy. Saika azonao antoka fa ho tafavoaka velona mandrakizay ny Knol anao. Midika izany: tsara kokoa izany. Aza mamoaka zavatra ho tafavoaka velona ary hita taratra ratsy amin'ny anaranao sy ny marika mandritra ny fiainana. Manorata lahatsoratra fohy mifandraika toy ny fidirana bilaogy ary ampifandraiso amin'ny URL vao navoaka ianao. Toy ny rehetra, ao anatin'izany ny teny lakile amin'ny lohatenin'ity Knol ity sy ao amin'ny lahatsoratra vatofantsika dia tsara ihany koa.
Mamoaha horonantsary Youtube. Volana vitsivitsy lasa izay, namoaka lahatsoratra iray momba ny fomba hahazoana aho ranom-pifandraisana avy amin'ny Youtube. Tsy averiko eto intsony izany atiny izany, dia miteny aminao fotsiny aho hanaraka ny torolalana Eto ary ho vita ny dingana faha-8 anao.
Raha atambatra, rehefa manomboka tranokala vaovao aho dia manana asa farafahakeliny 30 minitra alohan'ny vita. Raha manao ireo dingana valo ireo aho, dia afaka matoky fa hiseho amin'ny tranokala fikarohana Google ny tranoko afaka andro maromaro, raha tsy ora maromaro. Ahoana? Satria nomeko an'i Google isaky ny mahita ny URL vaovao. Raha nahita fomba hafa ampiasainao ny "alchemy" anao ianao dia aza misalasala mizara ireo fanehoan-kevitra etsy ambany.
Tags: valin'ny orinasafampiharana coupontapakila findaysarah robbinsSlider
Jun 28, 2011 ao amin'ny 6: 23 PM
Tiako ny miarahaba anao nanao asa tsara nick.
Jun 28, 2011 ao amin'ny 6: 28 PM
Fanoratana tsara, Nick. Izaho dia eo am-pamenoana ny famenoana ny tranonkalako manokana miaraka amin'ny teboka bala, teny manan-danja ary zavatra hafa mifandraika amin'ny orinasantsika. Tsy izay no tadiaviko ny hisehoan'ny zava-drehetra amin'ny farany, fa fanombohana ary misy vokany izany. Heveriko fa ianao no nanontany ahy indray mandeha hoe: "inona no misakana anao tsy hanomboka?" Novaliako hoe: “tsy maninona, hanomboka amin'ny herinandro ambony aho.” Namaly ianao hoe: “Tsia. Inona no misakana anao tsy hanomboka, anio? ”
29 Jun 2011 amin'ny 1:26 AM
Toa zavatra lazaiko io 😉
Mijanona amin'ny fandefasana mandady ve ianao mandra-pahatonganao manana ny lohatenin'ny teny fanalahidy feno……… Midika izany fa «voavolavola»?
29 Jun 2011 amin'ny 12:51 AM
Lahatsoratra tsara nofenoina ohatra marim-pototra sasany, saingy misy fanesorana tsy ampoizina roa; Pejy Twitter sy Facebook. Satria mandoa ny Google fidirana amin'ny fidirana amin'ny Twitter Twitter, kaonty iray manana fahefana mendrika mizara rohy ary angamba olona vitsivitsy mamerina mandefa azy io ho an'ny fepetra tsara dia hahatonga an'i Google hanadihady. Na dia tsy misy manaraka aza. Raha te hanana antoka ianao fa tsy hisy fiatraikany ny mpanaraka dia RSS RSS ao amin'ny kaonty freindfeed.
Toy izany koa ny pejy Facebook, fa tsy ny mombamomba azy, dia ho voadinika ihany koa. Raha mila fepetra tsara dia sioka rohy mankamin'ny satan'ny pejy Facebook, ary apetraho Facebook ny rohy mankany amin'ny satan'ny Twitter. Ny antony anolorako hevitra azy ireo dia satria betsaka ny olona efa manana iray na roa fanomanana.
Tsy mifanipaka velively amin'ny zavatra ataonao io, mazava ho azy, vitsivitsy monja izay tena niasa tsara tamiko. Na izany na tsy izany, ny fametrahana rohy izay nandehanan'i Google matetika raha ambany ny tahan'ny fandoroana sy ny tetibola mandady amin'ny sehatra vaovao na tranokala nohavaozina dia hampandeha haingana ny indexing ary mety izany.
29 Jun 2011 amin'ny 1:24 AM
Kevin, marina ny anao. Tokony ho ao izy roa. Ity no antony tsy nanamboaran'izy ireo ny fomba fahandro "alchemy" -ko:
- Miaraka amin'ny twitter, ny tanjona voalohany dia ny hoe mila manana kaonty avo lenta hialana amin'ny bitsika ianao. Raha mandeha mamorona kaonty twitter vaovao ianao dia mino aho fa tsy dia misy vidiny firy amin'ny fanatontosana ny sain'ny crawler.
- Amin'ny Facebook, ny olana dia ny pejy iray maharitra fotoana fohy vao mahavita tsara, ary ny manao ratsy dia mety hanimba kokoa noho ny tsara.
Raha manana ny loharano ianao, hevitra tsara iray hafa izay matetika no ataoko nefa tsy voatery omeko ny olon-drehetra ny fametrahana rohy mankamin'ny tranonkalanao vaovao avy amin'ny sehatra manana fahefana ambony efa anananao. Mazava ho azy, maro ny olona tsy mbola manana iray, ka averiko indray avy eo amin'ny alchemy.
Misaotra nanampy ireo.
29 Jun 2011 amin'ny 2:56 AM
Misaotra Nick noho ireto hevitra mahafinaritra ireto… halefako amin'ireo mpanjifako. Tsy mampaninona anao ve raha esoriko amin'ny bilaogiko amin'ny alàlan'ny fanomezam-boninahitra feno anao izany?
Jun 29, 2011 ao amin'ny 1: 08 PM
Tsy maninona aho. Azonao atao ny mamerina manafatra na mamerina milaza ny ampahany aminy mba tsy hianjady amin'ny atiny duplicate ianao.
29 Jun 2011 amin'ny 5:37 AM
Hevitra tsara Nick. Ity dia raikipohy matanjaka. Tsy nieritreritra momba an'i Wikipedia na i Knol aho, saingy izany dia noho ny fanovana tsy tapaka. Tsy maintsy tadidiko izany amin'ny ho avy.
Jun 29, 2011 ao amin'ny 1: 25 PM
Ny hevitra Youtube dia tsara kokoa noho ny wikepedia ……… ..
Jun 29, 2011 ao amin'ny 1: 35 PM
Tsy hanao ny iray aho raha tsy ny iray hafa. Tsy azo vinavinaina i Google, ary mandady matetika matetika i Wikipedia.
24 Nov 2011 tamin'ny 3:32 PM
Apetrako ao amin'ny bilaogiko fotsiny ilay rohy, ary tsy latsaky ny indray andro dia lasa mandady aho. Mora.
Jan 3, 2012 ao amin'ny 9: 18 AM
torohevitra tsara misaotra